यी स्थानमा राख्नु होस् धन ! धन दोब्बर हैन तेब्बर पनि हुन सक्छ ! – Krazy NepaL
March 28, 2021 549
शास्त्रमा ,आफूले मेहेनत गरेर कमाएको पैसा घरमा कस्तो ठाउँमा राख्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ बताइएको छ । घरको कुन दिशामा पैसा राख्दा लक्ष्मीले संधैब वास गर्छिन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
Prevआज चैत्र १५ आइतवार २०७७ निकै राम्रो छ हेर्नुहोस् राशिफल
Nextनुनले भरिएको कचौरा नुन बाथरुममा राख्नुहोस्, चम्किन्छ भाग्य